Andro fanavakavahana an-tserasera
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Andro fanavakavahana an-tserasera
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Seychelles Madagascar Malgache • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Alain St.Ange, Hon. Filohan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina
Tamin'ny fotoan'ny Andro Iraisampirenena ho fanoherana ny fanavakavahana, ary taorian'ny fe-potoam-piasan'ny Filoham-pirenena tamin'ny resaka nasionaly miaraka amin'ny valiny manaraka, ny antoko politika One Seychelles dia nanararaotra nanao antso avo sy tolo-kevitra ho an'ny ezaka lehibe sy azo antoka mampihatra ny tsy fanavakavahana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiarahamonintsika.
Andro fanavakavahana an-tserasera, izay notandremana tamin'ny 1 martsa isan-taona, dia miantso manokana ny famaranana ny fanavakavahana ny vehivavy sy ny zazavavy, ary koa mampiroborobo ny filàn'ny zon'olombelona, ​​ny fotoana ary ny fitsaboana mitovy. "One Seychelles" fanafoanana ireo endrika fanavakavahana manokana, manohitra ny vehivavy sy ny ankizy ankoatry ny hafa. Saingy, na eo aza ny famoahana am-bava farafaharatsiny ny fanirianay 'firaisan-kina' dia nasongadina tamin'ny anaran'ny antoko politika mavitrika rehetra ao amin'ny Repoblikan'i Seychelles tamin'ny: “United Seychelles” (Etazonia), “Linyon Demokratik Seselwa ( LDS); Lalyans Seselwa sy "En Sel Sesel" (One Seychelles,) dia tokony ho fantatsika kosa fa ny zava-misy ety an-tany dia mamela zavatra be dia be tadiavina amintsika rehetra hahatratrarana ilay ambondrom-bahoaka.
Tamin'ny alàlan'ny lahatsoratray tao amin'ny pejinay Facebook (@enselsesel), nanasongadina hatrany ny fahasahiranan'ireo reny miasa izahay. Renim-pianakaviana maro no manana safidy hafa azo antenaina aorian'ny fandoavana ny fotoana maha-be karama azy ireo, fialan-tsasatra noho ny fanolorany ny zanany kely 3 ka hatramin'ny 4 volana any amin'ny ivon-toerana fikarakarana zaza tsy ampy vola, tsy ampy fitaovana na tsy ampy mpiasa. Amin'ity hazavana ity dia ekentsika ny ezaka hampiato ny fialan-jaza mandritra ny efa-bolana. Mampahery ny mahita fa, raha manao feo mafy isika dia ho re ny fitarainan'ny Vahoaka. Na izany aza, hitanay fa ireo vahaolana natolotra araka ny nohazavaina tao amin'ny SONA an'ny filoha Faure; lavo lavitra izay ilaina mba hanamaivanana ny olana manjo fianakaviana maro sahirana. Manavakavaka ny vehivavy reny sy ny tsy miteraka ity toe-javatra ity. Izy io koa dia manasaraka ireo reny izay manam-bola hijanona ao an-trano sy hikarakara ny zanany amin'ireo tsy manan-tsafidy fa hamela ny fikarakaran-janany amin'ny hafa ary handeha hiasa.
Mba handresena ity endrika fanavakavahana mangina ity dia manome sosokevitra iray ny One Seychelles amin'ny fikarakarana fikarakarana zaza isaky ny Departemantam-panjakana, toy ny atao any an-kafa manerantany, mba hahafahan'ny reny miditra mora foana amin'ny zanany, ka mamporisika ny fampinonoana hatrany, ary mamela ny vehivavy mijanona amin'ny asa manontolo andro. Ny ora fiasana miovaova ho an'ny reny miasa dia mety hahasoa ihany koa, toy ny fampiakarana ny fe-potoana fialan-tsasatra ho enim-bolana.
Ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny fidirana amin'ny trano no nahatonga ny vehivavy sy ny zanany maro hijanona ao amin'ny tokantrano izay iharan'ny herisetra ara-batana, ara-tsaina ary ara-nofo mihitsy aza. Tsy ampy ny ONG iray nitarika antsasaky ny mody. Inona koa no ataon'ny Governemanta amin'izao fotoana izao hanampiana ireo iharan'ny herisetra an-tokantrano? Amin'ity lafiny ity dia deraiko Andriamatoa Dean Padayachy izay tamin'ny alàlan'ny ONG nataony izay nanao asa be dia be mba hipetrahany sy hananana vehivavy maro, amin'ny sarany manokana, izay nitsoaka ny ankohonana mpanararaotra. Na izany aza, mahavita be ihany izy.
Tsy azo odian-tsy jerena ireo karazana fanavakavahana hafa satria manimba ny demokrasia ihany koa. Araka ny nambaran'ny sekretera jeneralin'ny ONU Antonio Guterres: "Tokony hiasa mafy isika rehetra hanamboarana ny fisolahana sy ny polarisation izay manjaka tokoa eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika ankehitriny. Tokony hikolokolo ny fifankahazoan-kevitra isika ary hampiasa vola amin'ny fahombiazan'ny fahasamihafana. Ary tsy maintsy manohitra sy mitsipaka ireo olona politika manararaotra ny tsy fitoviana mba hahazoana tombony amin'ny fifidianana isika. ”
Ny Governemanta tamin'io andro io dia nampiavaka ny kilasy roa tao Seychellois: ireo olom-bitsy manana tombontsoa ahazoana retraire faha-55 taonany, ary azo antoka kokoa amin'ny 10 taona, ary ireo ambiny izay tsy maintsy miasa mandritra ny XNUMX taona hafa vao afaka misotro ronono. . Fanavakavahana izany.
Ny endrika fanavakavahana hafa dia misy ny fitsaboana tsy mitovy amin'ny vahiny sy Seychellois any amin'ny fireneny. Ny vahiny dia omena fitsaboana ambony noho ny Seychellois mahay sy za-draharaha mitovy amin'izany na miasa amin'ny fangatahana an'io asa io ihany.
Misy ihany koa ny fanavakavahana eo amin'ny sehatry ny asa, misy monopolie manjelanjelatra ary tsy raharahan'ny toby politika roa.
Ireo mpanao politika tena miahy ny Firenena dia tokony hiezaka hampiroborobo ny firaisankina, ny fandeferana ary ny fahatakarana bebe kokoa eo amin'ny Vahoakan'i Seychelles. Elaela loatra, ny politika no antony anavakavahana ny fiarahamonintsika. Ny kolontsaina 'ek nou, pa ek nou' dia mbola manjaka hatrany amin'ireo izay tsy mankasitraka ny fotoanan'ny politika maloto, ny fifehezana tanteraka sy ny fahatahorana ary ny fandriam-pahalemana dia mbola ampiasaina ho fitaovana fanavakavahana ara-politika. Raha te hampitsahatra ny fisaraham-bazana isika dia tsy tokony hijanona hifampiady sy hikatsaka ny tena firaisankina fa tsy ny marimaritra iraisana hahasoa ny antoko iray fotsiny. Ny firaisankina dia tsy midika hoe fitoviana - midika hoe firaisan'ny tanjona izany.